अमेजनमा बेच्ने सबै भन्दा खोजी वस्तुहरूसँग कसरी सुरु गर्ने?
सफलतापूर्वक अमेजनमा तिनीहरूलाई बेच्ने दायाँ उत्पादनहरू खोज्दा सबैभन्दा खोजी खोजी वस्तुहरू त्यो भीड बजारमा व्यापार सफलताको एक धेरै महत्त्वपूर्ण कारक हो। सायद, यो एक नो-ब्रेनर हो कि ठीक उत्पादन उत्पादन छनौट सबै केहि अघि व्यापार सफलताको बारेमा सबै कुरा निर्धारण गर्दछ। यसलाई अनुहार गरौं - अमेजनमा तपाईंको उत्पादन सूची अनुकूलन र व्यवस्थापन गर्दै कुनै पनि कुरालाई पूर्णतया राम्रो तरिकाले। यदि तपाई गलत उत्पादन छान्नुभएको छ भने लाभदायक एक प्रमुख आवश्यकताहरू पूरा गर्न असफल भएमा, तपाईको प्रस्तावहरू अमेजनका प्रायः खोजी खोजी वस्तुहरू प्रत्येक दिन हजारौं बिक्रेताहरूमा बिक्रि पाउनका लागी सम्भव हुनेछ। यही कारण बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ - तपाईले राम्रो उत्पादन र लगातार बेचेको दाहिने उत्पादन खोज्न केहि समय र प्रयास को लागी कुनै पनि हिचकिच्याउनु हुँदैन। त्यसोभए केले लाभदायक उत्पादन गर्दछ? तल तपाईं सुझावका लागि राम्रो उत्पादन फेला पार्न सुझावहरू र सिफारिसहरूको द्रुत र गन्दा चेकलिस्ट देखाउन जाँदै हुनुहुन्छ।
उत्पादनको अन्तिम मूल्य (औसत मा)
सबै भन्दा पहिले तपाईले यसलाई प्रदानको लागि लिनु पर्छ - मूल्य दायरा 10 देखि 50 डलर भित्र अमेजनमा एक मिठो मूल्य निर्धारण स्पेस जुन सबैभन्दा खोजी खोजी वस्तुहरू सामान्यतया त्यहाँबाट लिइन्छ। किन? किनकि विपक्षीहरू भन्छन्, मानिसहरु कहिलेकाहीँ त्यहि दायरा भित्र औसत मूल्य ट्याग हेर्दा कहिलेकाहीँ कहिलेकाहीँ खरिदका निर्णयहरू लिन सक्दछन्। तपाईं सट्टा पछ्याउने अर्को कारण हो कि यस्तो धेरै महंगी वस्तुहरू शायद साधारणहरू हो, वास्तवमा उनीहरूको बिना धेरै, सही? आखिर, यो कम मूल्य बाधा छनौट गर्नुहोस् तपाईंको सुरूवात निर्णय बजारमा प्रवेश गर्न सुरु हुनेछ।
एक विस्तृत अर्थमा लिईएको छ, सही उत्पादनको वजन छान्नु अमेजनमा तपाइँको प्रस्तावहरू हेर्न खोज्ने धेरै महत्त्वपूर्ण चीजहरू एक धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। मेरो लागि, मलाई विश्वास छ कि वास्तवमा एक लाभदायक ड्रप-शिपिंग उत्पादनको सबैभन्दा राम्रो औसत वजन लगभग 1.5 देखि2Source - temp readings pc.5 किलोग्राम लगभग रहनुपर्छ। त्यो स्वाभाविक रूपमा प्याकेजको अधिक बिकनीय आकार निश्चित रूपमा सस्तो वितरण लागतको साथ निर्धारण गर्दछ।
उत्पादन दायरा समान समान श्रेणी भित्र
चीज भनेको सामान्यतया, यो एक मुश्किल व्यवस्थापन योग्य कार्य हो कि उत्पादन बीएसआर (उत्तम बिक्रेता श्रेणी मा कुनै सटीक अनुमान ), निस्सन्देह तपाईले यसलाई बेच्न शुरु गर्नु भयो। तर यसको बारे तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा निश्चित छ कि तपाइँको नयाँ उत्पादनको उचित संभावना राम्रो तरिकाले बेचेको छ। त्यसैले, म यस्तै कोटि उत्पादनहरू र उनीहरूको बीएसआर स्कोरहरूमा दुई पटक जाँच गर्न सिफारिस गर्दछु। मेरो लागि, म एउटै मुख्य श्रेणीमा अमेजनका सबैभन्दा खोजी गरिएका वस्तुहरू जाँच गर्नका लागि 5,000 बीएसआर नम्बर लिने थ्रेसहोल्डको रूपमा लिनेछु, वा यस्तै उत्पादनहरू पनि। केवल चीजहरू खाली गर्न - यो मेरो आफ्नै धारणा हो जुन मैले भर्खरै मेरो ईकमर्स बेचन अभ्यासको माध्यमबाट विकसित गरेको छु। जे भए पनि, समयको रूपमा देखाइएको छ, सुझावले काम गर्दछ।